တရုတ်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Polarized Sunglasses နေကာမျက်မှန်အရောင် Mirror Lens 100% UV Blocking ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | Baolai
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Polarized Sunglasses နေကာမျက်မှန် Colour Mirror Lens 100% UV Blocking
၃။ ★စတိုင်ဖြင့်သင့်မျက်လုံးများကိုကာကွယ်ပါ you ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်စတိုင်နှစ်မျိုးလုံးအရေးကြီးကြောင်းကိုသိသောကြောင့်သင်တစ်ချိန်တည်းမှာမထင်မမှတ်ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ polarized မျက်မှန်များကိုသင်၏မျက်စိကာကွယ်ရန်သင်၏မျက်စိများကိုကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ သင်ကားမောင်းနေသည်ဖြစ်စေ၊ လမ်းလျှောက်သည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်စေသင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်၏အနည်းငယ်သာလျှို့ဝှက်ချက် - သင်၏ KALIYADI နေကာမျက်မှန်ကိုမသိရသူများအားလုံးအတွက်မွေ့လျော်ပါ။
၄။ ★နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပိုမိုလွတ်လပ်စွာနေပါစေ▶ထိုနေကာမျက်မှန်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သောထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောမှန်ဘီလူးများပါရှိသည်။ Polarization သည်မှန်များ၊ တောက်ပသောသို့မဟုတ်ပွတ်ထားသောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အခြားနေရောင်ခြည်များရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းများမှရောင်ပြန်ဟပ်နေသောအလင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကအမြဲတမ်းအနားယူနေသလိုခံစားရတယ်။ သင်သည်အလုပ်သို့ကားမောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ပန်းခြံထဲ၌လမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ကမ်းခြေတွင်နေရောင်ခြည်ကောင်းကောင်းရနေစေကာမူသင်၏မျက်လုံးများကိုပိုမိုလျှော့ချပေးသောကြောင့်နေ့၏အဆုံးမှာငြီးငွေ့ဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။
5. ★၎င်း၏စစ်မှန်သောအရောင်များတွင်ကမ္ဘာကိုကြည့်ပါ။ glasses နေရောင်ကာမျက်မှန်၏ HD polarized မှန်ဘီလူးများသည်ရောင်ခြည်နှင့်ဖြန့်ထားသောအလင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အရောင်ခြယ်မှုနှင့် CLEAR VISION တို့ကြောင့်စစ်မှန်သောအရောင်လက်ခံမှုကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ၊ ကားမောင်းခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်မည်သည့်ရေအားကစားများတွင်မဆိုနေကာမျက်မှန်ကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်မည်မျှကောင်းမည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာကြီးကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ရင်းသင်၏မျက်လုံးများကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုဟုခံစားရလိမ့်မည်။
6. ★ရွှေ့အခမဲ့ခံစားချက်တွေအခမဲ့▶ကျနော်တို့ဘောင်ကဒီတိုင်း wearer အပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ဖြစ်နှင့်နိုငျပုံကိုမသက်မသာကိုငါသိ၏။ မင်းရဲ့ရူပါရုံကိုဂရုစိုက်ပြီးမင်းနေသမျှမှာသူတို့နေသမျှကာလပတ်လုံးနေကာမျက်မှန်တပ်ထားဖို့ကူညီပေးချင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ဘီလူး၊ ခွဲခြမ်း။ ခံနိုင်သော polarized မှန်ဘီလူးများအတွက်အလွန်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများကိုရွေးယူခဲ့ပြီးအစွန်းတိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ပွတ်သပ်ချောမွေ့စေရန်အတွက်နေရောင်အောက်တွင်သင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းမေ့သွားလိမ့်မည်။ နေကာမျက်မှန်တပ်ခြင်းသည်ယခုအချိန်တွင် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာမရှိ၊
Item NO ။ 10161-6354
အရွယ်အစား 53x60x17 စင်တီမီတာ
ရှေ့သို့ အမျိုးသားများအတွက် Aviator နေကာမျက်မှန် 100% ခရမ်းလွန်ကာကွယ်သည့် Goggle Alloy Frame
အမျိုးသားများအတွက် Aviator နေကာမျက်မှန် 100% ခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှု G ...